Zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy (ZFLM) – Sehatra ivondronana, ifampizarana, sy ifampitaizan'ny Zanaky ny FLM maneran-tany
Akon’ny Isantaona faha-34 Toby LOVASOA Antohomadinika – Annexe Tobilehibe FARIHIMENA
MISAOTRA AN’I JESOSY, fa tontosa soa aman-tsara t@ 8,9 ary 10 Jona 2017 lasa teo ny ISANTAONA FAHA-34 Toby LOVASOA Antohomadinika, Annexe Tobilehibe Farihimena, Fifohazana miray @ FFPM, teto @ […]
Faha-146 taona nanambaran’ny FLM ny « FILAZANTSARA » teto Antananarivo
Alahady 21 Mey 1871 – Alahady 21 Mey 2017: 146 taona nanambarana ny « FILAZANTSARAN’I JESOSY » teto Antananarivo Renivohitry Madagasikara ny Fiangonana Loterana Malagasy na FLM.
MISAOTRA AN’I JESOSY KRISTY TOMPO, fa tontosa soa aman-tsara tamin’ny 08 ka hatramin’ny 15 Janoary lasa teo ny Isan-kerintaonan’ny Toby Nenilava Faradofay, Toby mirafitra amin’ny Tobilehibe Ankaralamalaza. Faneva : « Mitadiava an’i […]
EPIFANIA, fanehoan’Andriamanitra ny Voninahiny! Inona moa izany hoe, « EPIFANIA » izany? Voambolana fampiasan’ny fanjakana Romana hilazàna ny fisandràtan’ny mpanjaka na [empereur] eo amin’ny seza fiandrianany sy fisehoany eo amin’ny vahoakany, ny […]
Fiarahabana sy Toro-lalana
Miarahaba anao amin'ny Anaran'i Jesosy Kristy Tompo tongasoa eto amin'ny pejy ifaneraserantsika zanaky ny Fiangonana Loterana Malagasy mieli-patrana manerana izao tontolo izao, sy toeram-piraketana ho antsika.
Maro karazana ireo zavatra azonao trandrahana ato, toy ny radio, filazam-baovao, fampianarana, sns.
Arak'izany dia hitanao :
Ery ambony ny ahafahana manao karoka mivantana
Manaraka azy ao ireo rohy ahafahanao mivezivezy ato amin'ny seraserantsika toy ny Fampianarana, sy ny Baiboly, sns
Eo ambony ireo filazana farany tokony ho fantatra arahin'ireo bokotra azonao anehoana Fitiavana an'ity pejy ity
ireo Teny fanalahidy ahazahoana mahita avy hatrany ireo soratra mifandraika amin'izany.
ireo Fampianarana farany,
ireo Mpitsidika farany manerana izao tontolo izao.
Etsy anila koa ny Sarin'ireo Fiangonana Loterana Malagasy manerana izao tontolo izao.
Eo ambany ireo video notsoahana avy any amin'ny rohy Youtube-ntsika ZFLM
Farany dia aza hadino ny mikambana sy mandray anjara ao amin'ny serasera facebook-ntsika izay hitanao erY ambony ny rohy mankany.
Nota: Aza hadino ny maneho fitiavana ireo pejy vangianao amin'ny alalan'ny bokotra Facebook sy Google+ eo ambaniny. Miseho etsy anila ankavia ny isan'ireo izay efa naneho "Agape" ireo pejy ireo. Ireo bokotra etsy anila ireo koa no ahafahanao mizara pejy any amin'izay sehatra sosialy mety aminao. :)
Manana pejy youtube isika ZFLM izay afahafahantsika manaraka an-tsary ireo tranga loterana rehetra manerana ny nosy sy any ivelany toy ny toriteny sy fampianarana marosamihafa, sy koa fivorian-dehibe isan-tsampana. Misy koa ireo vaovao avy any amin'ny foibe, sy resadresaka atao amin'ireo ray aman-dreny.
Indreo ary atolotra anao antsary ny santionany amin'izany.
Mirary ny Fiadanan'ny Tompo ho anao.
Etsy kely ange e!